Mpiadina miisa 8.577 no nisoratra anarana vonona ny hiatrika izany, miparitaka amina foibem-panadinana miisa 72. Raha araka ny fanazavana azo teo anivon’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika dia vonona tanteraka ireo tompon’andraikitra rehetra voakasika. Ny mpitandro ny filaminana koa vonona hanatanteraka ny fiambenana. Tsiahivina moa fa mpianatry ny lisea sy mpianatry ny “Centre de formation professionnel” sasantsasany no afaka miatrika ity fanadinana BEP ity, niatrika fiofanana nandritra ny telo taona raha kely indrindra. Ankoatra ny lalam-piofanana fitantanana izay tena be mpisafidy tokoa dia anisan’ny lalam-piofanana nianaran’izy ireo koa ny rafitra amin’ny hazo, ny fitarihina herinaratra…. Eto amin’ny Faritra Analamanga sy ny amin’ny faritra Atsinanana no be mpiadina indrindra. Mikasika ny fanadinana BEPC manokana moa dia fantatra fa efa nisy tamin’ireo foibem-panadinana sasany no namoaka ny vokatra tamin’ity faran’ny herinandro ity toy ny tany Ikalamavony sy Faratsiho.